Virtual Roundtable Discussion with CSOs on Extractives and Inclusive …
What to Upload to SlideShare by SlideShare 6811032 views
Customer Code: CreatingaCompany C... by HubSpot 5036625 views
Be A Great Product Leader (Amplify,... by Adam Nash 1131256 views
Trillion Dollar Coach Book (Bill Ca... by Eric Schmidt 1319619 views
APIdays Paris 2019 - Innovation @ s... by apidays 1586505 views
A few thoughts on work life-balance by Wim Vanderbauwhede 1161562 views
On 26 November 2020, MCRB held its first virtual roundtable discussion series with Civil Society Organizations on “Extractives and Inclusive Business”.
Read more: https://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/virtual-roundtable-discussion-extractives-and-inclusive-business.html
1. သဘာဝပတ်ဝန််းကျင် ရေေှည်တည်တံ့ရေ်းအတွက် တွင််းထွက်သယဇာတကဏ္ဍနှငံ့် လူမှုရေ်းအကျ ်းဝင်မှုဆိုင်ော အွန်လိုင််း ာကာ်းဝိုင််း ၂၀၂၀ ခုနှစ် နုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်န ေ့
2. Founders: Financial support from governments of: • UK • Norway • Switzerland • Netherlands • Ireland • Denmark မမန်မာံ့ာ်းပွာ်းရေ်းကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုေှရေ်း အရထာက်အကူမပ ဌာန စီးပာီးနရီး အဖွဲ့အစည်ီးမ ာီး၊ အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်ီးနှင် အစုီးရ အဖွဲ့အစည်ီးမ ာီးအကကာီး တာဝ ်ယူမှုရှနာစီးပာီးနရီး လုပ်င ်ီး မ ာီးဆုင်ရာပညာ၊ ဗဟု ုတရရှနစရ်လည်ီးနကာင်ီး၊ အရည် အန ီးမမင်မာီးနစရ်လည်ီးနကာင်ီး၊ နှစ်ဦီးနှစ်ဖက် အကကာီး နဆီးနနီးညနှုင်ီးမှုမ ာီး မဖစ်နပေါ်လာနစရ ်နှင် မမ ်မာ နုင်ငံတင် တာဝ ်ယူမှုရှနာစီးပာီးနရီး လုပ်င ်ီးမ ာီး နပေါ်ထ ်ီးလာနရီး အတက်အမ ာီး၏ ယံုကကည်မှုကု ရရှနာမာ မတ် က နာအဖွဲ့အစည်ီးတစ်ရပ် မဖစ်နပေါ်လာနစရ်လည်ီးနကာင်ီး ရည်ရွယ် ဖွဲ့စည်ီးခပါ ည်။ myanmar.responsible.business www.mcrb.org.mm No. 6.A Shin Saw Pu Rd, Ahlone, Yangon Tel/Fax: 01 01-512613
3. လုပ်နဆာင်ဆ - ကဏ္ဍအလုက် စီးပာီးနရီး လုပ်င ်ီးမ ာီး ၏ က်နရာက်မှုမ ာီးအာီး နလလာဆ ်ီးစစ်မခင်ီး န ောက်ဆက်တ   ICT SWIA:  :   ( )         
4. တင်ီးထက် ယံဇာတ ကဏ္ဍလုပ်င ်ီးမ ာီး No Date Topics Type Stakeholders710/11 Feb 2020 တာဝန်ယူမှုသာစီးပာီးသ ီးနှင် ပတ်ဝန်ီးကျင်ထိခိိုက်မှုဆန်ီးစစ်ခခင်ီး၏ အခန်ီးကဏ္ဍ _သ နံသချာင်ီး င်တန်ီး အ ပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ီးမျာီးအတက် 8 22/10/2020 ခမန်မာနိိုင်ငံ ှိ ကမ်ီးလန် ဘာဝဓာတ်သငွဲ့ ကိစစ ပ်မျာီးဆိိုင်ာစကာီးဝိိုင်ီး _သကျာက်ခဖြူ စကာီးဝိိုင်ီး ကိုမပဏနှင် သေ ခံမျာီး929/8/2019 ပတ်ဝန်ီးကျင်ထိခိိုက်မှုဆန်ီးစစ်ခခင်ီးနှင် အမျာီးခပည် ူပူီးသပေါင်ီးပေါဝင်ခခင်ီး _သကျာက်ခဖြူ င်တန်ီး အ ပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ီးမျာီးအတက် 10 2/3 Jul 2019 တာဝန်ယူမှု ှိသာစီးပာီးသ ီးဆိိုင်ာလိိုက်နာကျင် ံိုီးမှုမျာီးဆ ိိုို့ သေ ခံစီးပာီးသ ီးလိုပ်ငန်ီးမျာီးအတက် င်တန်ီးအလိုပ်ရံိုသဆီးသနီးပ င်တန်ီးအလိုပ်ရံိုသဆီးသနီးပ သေ ခံစီးပာီးသ ီးလိုပ်ငန်ီးမျာီး 11 May/ Jun 2019 အ ပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်ီးမျာီးအတက် ဘာဝပတ်ဝန်ီးကျင်နှင်ဆိိုင်သာဥပသေသ ီးာAdvocacy င်တန်ီး_Vermont LawSchool ခဖင် ပူီးသပေါင်ီးပပီး ပခူီး တင် င်တန်ီးသပီးခခခင်ီးခဖစ် င်တန်ီး အ ပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ီးမျာီးအတက် 12 15-18 Nov2019 ခမန်မာနိိုင်ငံတင် ဘာဝပတ်ဝန်ီးကျင်နှင်ဆိိုင်သာကာကယ်သစာင်သ ှာက်ခခင်ီးမျာီးကိို စမ်ီး ည်ခမြှင်တင်ခခင်ီး_ကသလာ_Vermont LawSchool ခဖင် ပူီးသပေါင်ီးသဆာင် ွက်ခခင်ီး င်တန်ီး အ ပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်ီးမျာီးအတက် 13 7/8 Oct 2019 တာဝန်ယူမှု ှိသာစီးပာီးသ ီးဆိိုင်ာလိိုက်နာကျင် ံိုီးမှုမျာီးဆ ိိုို့ ကချင်ခပည်နယ် ှိ သေ ခံစီးပာီးသ ီးလိုပ်ငန်ီးမျာီးအတက် င်တန်ီးအလိုပ်ရံိုသဆီးသနီးပ င်တန်ီးအလိုပ်ရံိုသဆီးသနီးပ သေ ခံစီးပာီးသ ီးလိုပ်ငန်ီးမျာီး
5. လုပ်နဆာင်ဆ : နရရှည်တည်တံနာစီးပာီးနရီးလုပ်င ်ီးမ ာီးနှင် ခမခာီးဆက်ဆံမှု ကင်ီးနာလုပ်င ်ီးခင်
6. နရရှည်တည်တံနာစီးပာီးနရီးလုပ်င ်ီးမ ာီးနှင် ခမခာီးဆက်ဆံမှု ကင်ီးနာလုပ်င ်ီးခင် ဆုင်ရာ လုပ်င ်ီးမ ာီး No Date Topics Type Stakeholders 1 16/12/2020 ခမန်မာ/ အစစသ ီး - စီးပာီးသ ီးနှင်မ န်စမ်ီးမှုဆိိုင် ာသဆီးသနီးပ (၂) အန်လိိုင်ီးဝက်ဘနာ အမျာီးခပည်ူ2 3/12/2020 အမျိီး မီးအခင်အသ ီး (၁၆) က်တာ လှုပ် ှာီးမှု အတင်ီး ကျသ ာက်သာအခပည်ခပည်ဆိိုင် ာမ န်စမ်ီး ူမျာီးသနို့ အထိမ်ီးအမှတ်အတက် မ န်စမ်ီး ူမျာီး လံိုခခံ ပပီးသပျာ် ွှင်သာလိုပ်ငန်ီးခင်အာီး ခပ စိုပျိီးသထာင်ခခင်ီး။စီးပာီးသ ီးလိုပ်ငန်ီး ှင်မျာီး၊ ကျာီးမတန်ီးတူညမျှသ ီး ပူီးသပေါင်ီးသဆာင် ွက်မှုအ င်ီး (BCGE) နှင် အတူ အန်လိိုင်ီးဝက်ဘနာ အမျာီးခပည်ူ3 24/11/2020 ခမန်မာ/ အစစသ ီး - စီးပာီးသ ီးနှင်မ န်စမ်ီးမှုဆိိုင် ာသဆီးသနီးပ (၁) အန်လိိုင်ီးဝက်ဘနာ အမျာီးခပည်ူ4 20/10/2020 & 9/11/2020 ၂၀၂၀ခိုနှစ် နိိုဝင်ဘာလ ၉ က်သနို့နှင် သအာက်တိိုဘာလ ၂၀ က်သနို့ အ ီး ီးတင် မ န်စမ်ီး ူမျာီး၏ အခင်အသ ီးမျာီးကိို သပေါင်ီးစပ်ထည် င်ီးအသကာင်အထည်သဖာ်သဆာင် ွက်သာအမျိီး ာီးအဆင် မဟာဗျြူဟာစမံကိန်ီး ကာလလတ် (၂၀၂၀-၂၀၂၅)၊ အခန်ီး(၃) ှိ အလိုပ်အကိိုင်ကဏ္ဍ သဆီးသနီးကကံခပ လျက် ှိပေါ ည်။ အန်လိိုင်ီးအစည်ီးအသဝီး မဟာဗျြူဟာစမံကိန်ီးဝင်မျာီး522/5/2020 COVID 19သ ကာင် ခမန်မာခပည်တင် ှိသာမ န်စမ်ီး ူမျာီး၏ အ က်သမီးဝမ်ီးသ ကာင်ီး အသခခအသန အပေါအ၀င် အသတွဲ့အကကံ မျာီး အန်လိိုင်ီးဝက်ဘနာ အမျာီးခပည်ူ6 21/05/2020 လိုပ်ငန်ီးခင်တင် LGBT + မျာီး တန်ီးတူ ညမျှမှု ခံစာီး ှိသ ီး လမ်ီးညွှန်ချက်ထိုသဝခခင်ီး ကိုမပဏမျာီးအတက်711-18/5/2020 က်တံသ ာင်အလံ လွှင် န် အ င်ခဖစ်ပပလာီး။ အန်လိိုင်ီးအစည်ီးအသဝီး ကိုမပဏမျာီးအတက် 8 15/2/2020 မ န်စမ်ီး ူမျာီး၏ အလိုပ်အကိိုင်နှင် “သဝပံိုကျနှုန်ီးထာီး” - ခမန်မာနိိုင်ငံ အတက် ခဖစ်နိိုင်သချက ဘာလ။ အလိုပ်ရံိုသဆီးသနီးပ စီးပာီးသ ီးလိုပ်ငန်ီးမျာီးမှ လိုပ်ငန်ီး ှင်မျာီး၊ အစိိုီး / ဌာနဆိိုင် ာမျာီးမှ တာဝန် ှိ ူမျာီး၊ မ န်စမ်ီးအ င်ီးအဖွဲ့မျာီးနှင် မ န်စမ်ီးကျွမ်ီးကျင်ပညာ ှင်မျာီး
7. နေ ဆုင်ရာ စမ်ီးရည်မမင်တင်မခင်ီး လုပ်င ်ီးမာီး
8. လုပ်နဆာင်ဆ : ဒီဂျစ်တယ်တခွင့်အတခေး
9. လုပ်နဆာင်ဆ : ပင့်အတသ်တ် ၂၀၂၀ ခ်ီ ့်တွံ်ာ
10. ပုဂျဂလိက လံုခွံြုံေး ကုမ္ပဏီမ္စာ နှ့်အတပယတသကတ ေးသာေးလအလာမ္ှု ရည်ရွယ်ခ က်မ ာီးမှာ - Private Security Companies (PSC) ဝ ်ထမ်ီးမာီး ၏လုပ် ာီးအခင်အနရီး၊ ရပ်ရွာလူထုအနပေါ် က်နရာက်မှု၊ အမခာီးပတ် က်ဆက်စပ် ူမာီး အနပေါ် က်နရာက်မှု တုေ့ကုနလလာရ ်။ အမခာီးနုင်ငံမ ာီးရှ PSCs ဆုင်ရာ ဥပနေ၊ စည်ီးမ ဉ်ီးစည်ီးကမ်ီးမာီးနှင် စပ်လ ဉ်ီး ည် နကာင်ီးမ ်နာအနလအကင်နကာင်ီးမာီးကု အနှစ်ခ ျုပ်နဖာ်မပနုင်ရ ်။ ပုဂ္ဂလကလံုခခံျုနရီးကဏ္ဍ (PSC Sector) အတက် မဟာဗ ျုုဟာတစ်ရပ်ကု ခ က်မှတ်နုင်ရ ်။ ဥပနေ - မူနဘာင်မာီးရှ နရှာင်ကကဉ် င်နာစုီးရမ်ဖယ်ရာမ ာီးနှင် အနတရာယ်ရှနာအခ က်မာီး ကု တ်မှတ်နဖာ်ထုတ်နုင်ရ ်။ လူူ့အခင်အနရီးနှင်ဆက်စပ်နာမမဖစ်မန နလကင် င်ကကာီးရမည် အနမခခံ နဘာ တရာီးမ ာီးနှင် ပစစည်ီးမာီး (materials) အပါအဝင် မမ ်မာနုင်ငံ၏ ဥပနေမူနဘာင် မ ာီးတင်ပါ၀င် င်နာVPSHR ကု ထင်ဟပ်နစမည် အဓက အခ က်မ ာီးကု အကကံမပျုနုင်ရ ်။ MCRB ည် International Code of Conduct Association (ICOC) ၏ CSO အဖွဲ့ဝင် မဖစ် ည် 10
11. မမ ်မာနုင်ငံရှ ဇဝမ ျုီးစံု မ ျုီးကမ ာီး၊ လူူ့အခင်အနရီး နှင် စီးပာီးနရီးလုပ်င ်ီးမ ာီး ဆုင်ရာ ထုတ်နဝမှုမ ာီး Available http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/resources/briefing-paper-biodiversity-human-rights-and- business.html “Investors need identify their impacts on Myanmar’s biodiversity and ecosystems early on, to avoid cost and conflict later”
12. ေးခမ္်ာ စီးပာီးနရီးကဏ္ဍအလုက် က်နရာက်မှုမ ာီးအာီး နလလာဆ ်ီးစစ်မခင်ီးမ ာီး တင် နမမယာမပ ောနလလာ 2018 Briefing Paper: Land Rights and Business in Myanmar - Consultation Draft ခမ္စိြုံ သာ ေးခမ္်ာဥပေးဒသ်တယ်တ ပတေးပေါ်ေးပေါကတေး ခယငကတ ကူညီ နတ MCRB မ္ှ ကမ္တ လှမ္တ ထာ ပေါသညတ ခမ္စိြုံ သာ ေးခမ္်ာဥပေးဒသ်တယ်တ ပတေးပေါ်ေးပေါကတေး ခယငကတ ခပညတေးထာ့်တ်ု ေး ှှေ့ေးနွစြုံပတရံု သို အလုပတ့်နတ ခ်ီခ်ဉ်မ္ူကကမ္တ ခေးပေါ် သေး ာထာ မ္ှယတွစကတမ္စာ ေးပ ပို အထာ ပေါသညတ။ UNDP,UMFCCI ယို အနှ့်အတ ခယူ ခမ္စိြုံ သာ ေးခမ္်ာဥပေးဒသ်တ န အပယတသကတေးသာ ကုမ္ပဏီ မ္စာ နှ့်အတ ခကကံေးပ ပညာ ှ့်တမ္စာ နှ့်အတ Online business consultation ကို ၂၀၂၀၊ ဒီဇ့်တ ာလ ယင့်တ ကစ့်တ ပတ လုပတေး ာ့်တသငာ မ္ညတခြ်တသညတ။ NLL WG သို အ 12
13. ခဂျယိလိုကတ်ာ မ္ှုယိုကတြစကတေး ▪ ခမ္နတမ္ာကုမ္ပဏီမ္စာ ခယငကတ ်ီ ပငာ ေး လုပတ့်နတ ကစ့်အတဝယတေးခြာ့်အတမ္ှနတေး ဂျုဏတသိကခာ ို့်တာလကတ်င်ာခုပတ ထုယတေးဝ (ဇူလို့်တ ၂၀၁၈) ▪ ခဂျယိလိုကတ်ာ မ္ှုယိုကတြစကတေး ေးကာတမ္ ှ့်တ(ACC) က ထုယတခပနတထာ သညအတ ခေးခွွံမ္ူ (၈)ွစကတ ေးပေါ်ယင့်တ မ္ူယညတေး ငထာ ပပီ ACC၊ ခမ္နတမ္ာနို့်တ့်ံ ကုနတသညတြီးကီ မ္စာ နှ့်အတ ်ကတမ္ှုလကတမ္ှုလုပတ့်နတ ှ့်တမ္စာ ခသ့်တ ွစြုံပတ (UMFCCI) နှ့်အတ ကုလသမ္ဂျဂြငံှေ့ ပြိြုံ မ္ှု ခ်ီခ်ဉ် (UNDP)ယို အနှ့်အတ ပူ ေးပေါ့်တ ထုယတေးဝခွ့်တ ခြ်တသညတ။
14. ခမ္နတမ္ာနို့်တ့်ံခမ္စိြုံ သာ လူ အခွင့်အတခေး ေးကာတမ္ ှ့်တ 14 MCRB ည် UNDP မှ မမ ်မာနုင်ငံအမ ျုီး ာီးလူူ့အခင်အနရီးနကာ်မရှင် အတက် က င်ီးပနာစီးပာီးနရီးလုပ်င ်ီးမ ာီး နှင် ဆက်စပ်နာလူူ့အခင်အနရီး ဆုင်ရာ င်တ ်ီးတင် လူအရင်ီးအမမစ် မဖင် ပါဝင်မည် နကာ်မရှင် နှင် ဝ ်ထမ်ီးမ ာီးအတက် ပုမု ဆက်စပ် အန ီးစတ် နာင်တ ်ီးမ ာီးထပ်မံ မဖစ်လာနစရ်နမ ာ်လင် ည် MNHRC, ရင်ီးနှီးမမျုပ်နှံမှု နှင် ကုမပဏမ ာီးည ်ကကာီးမှု ဦီးစီးဌာ (DICA), ပတ်ဝ ်ီးက င်ထ ်ီး မ်ီးနရီးဦီးစီးဌာ (ECD), အဂ္တလုက်စာီးမှု တုက်ဖ က်နရီး နကာ်မ ရှင် (ACC) စ ည် အဖွဲ့မ ာီး ပါဝင် ည် စ် ောမှုမ ာီးအာီး နမဖရှင်ီး ည် စ စ် (Grievance handling’ workshop) ဆုင်ရာ အလုပ်ရံုနဆီးနနီးပ က င်ီးပရ ်ရှ
15. MCRB website နှင် Facebook page ုေ့ နလလာရ်ဖတ်နခေါ်ပါ ည် ! •Business and Human Rights •Children's Rights and Business •Corruption and Business Integrity •Cultural •Disability and Business •Discrimination in the Workplace •Environment and Investment •Grievance Mechanisms •Indigenous Peoples Rights and Business •International Human Rights Conventions •Labour Rights •Land Rights and Business www.mcrb.org.mm https://www.facebook.com/myanmar.responsible.business
16. Thank You! ဇါwww.mcrb.org.mm myanmar.responsible.business
17. ADDITIONAL SLIDES
18. ဝ တာဝ ်ယူမှုရှနာစီးပာီးနရီးလုပ်င ်ီးဆု ည်မှာ မမ ်မာနုင်ငံနှင် မမ ်မာမပည် ူလူထု အာီးလံုီးအတက် နရရှည်အကျုီးစီးပာီးမဖစ်ထ ်ီးနစမည် စီးပာီးနရီးလုပ်င ်ီး လုပ်နဆာင်ခ က်မ ျုီး မဖစ် ည်။ နုင်ငံတကာစံခ ်စံညွှ ်ီးမ ာီး အရ တာဝ ်ယူမှုရှနာလူမှုဘဝနှင် ဘာဝပတ်ဝ ်ီး က င်ဆုင်ရာ စမ်ီးနဆာင်မှုမ ာီးအပါအဝင်နှင်အမပည်မပည် ဆုင်ရာ လူူ့အခင်အနရီးနှင်အလုပ် မာီးစံခ ်စံညွှ ်ီး မ ာီးနှင် ဥပနေတုေ့ကုလုက် ော ည် စီးပာီးနရီး လုပ်င ်ီးနဆာင်ရွက်မှုမာီးကု ဆုလုမခင်ီးမဖစ် ည်။ 18
19. 19 What Doesa‘Responsible Business’ Do? Obey the Law Respect employees ၎၏ Treat customers responsibly ၎၏ Customer Pay taxes Treat other businesses responsibly Respect the EnvironmentRespect human rights ႔ Be transparent Engage stakeholders Not pay bribes/tea money /
20. Fact sheets 20
Verbit - The State of Inclusivity, A Global Perspective
Acoustic Protocol 2021
Labour Issues in the Telecom Sector: Myanmar Labour Laws and Reform Plans
Community Grievance Management Experiences
Community Outreach (SLO)
Workplace Safety in Telecom Industry
Workshop on Safety and Labour Issues in the Myanmar Telecoms Sector
‘Dignity by Design’ in the Built Environment